Taokaenoi Season2EP. 04 - Aviva Chomsky
Taokaenoi Season2EP. 04
မင်္ဂလာပါခင်ဗျ ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျ ဒီနေ့ ကျနော်တို့ရောက်နေတာက ထောက်ကယ်နွိုင်ကလပ် ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ကလပ်ပါခင်ဗျ။ အခု Season2ရောက်နေပါပြီ။ ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျ ကျနော်တို့ ဘယ်သူနဲ့လဲခင်ဗျ? ဆင့် ခင်ဗျ ဖတ်ခ်ျ ခင်ဗျ ဒီနေ့ ကျနော်တို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုက Tasty ရဲ့ Section လို့ပြောလို့ရပါတယ် အာ.. ကျနော်တို့ အစားအသောက်တွေ မြည်းမယ် ၁၀ ဆိုင် ! ဆုတံဆိပ်ရတဲ့ဆိုင် ဘာဆုတံဆိပ်လဲခင်ဗျ? ဘစ် ကူမောင် ခင်ဗျ အာ.. ဘစ် ကူမောင် ခင်ဗျ ! ဘာရှိလဲ နောက်တစ်ခုက? မစ်ချလင်စတား အာ.. မှန်ပါတယ်ခင်ဗျ မစ်ချလင်စတား မစ်ချလင်စတားက ဘာဆုလဲဆိုတာ မသိသေးသူတွေအတွက် မစ်ချလင်ဂိုက် လို့ခေါ်တဲ့စာစောင်ကနေ ဖြစ်ပွားလာတဲ့ဆု ဖြစ်ပါတယ် မစ်ချလင်ဂိုက် အာ.. မစ်ချလင်ဂိုက် မှန်ပါတယ် အခုစာစောင်က ရေးတာက ကျနော်တို့အခုလိုမျိုး ခရီးလှည့်ရမယ်တဲ့ မစ်ချလင် တာယာလိုမျိုးလေ။ ခရီးလှည့်မယ် စားမယ်သောက်မယ် ပြီးတော့ ခရီးလှည့်ဖို့ လှည့်ပြီး စားဖို့သောက်ဖို့အတွက် မစ်ချလင်တာယာလဲမယ် အဲဒါကြောင့် အမှတ်ပေးတဲ့စနစ် ဖြစ်လာတယ် 1 star,2star,3star လို့ရှိတယ် ကျနော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာ သိကြတဲ့အတိုင်း 1 star ဆိုင်ရှိတယ် အင်.. ဆိုင်အများကြီးဘဲ ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျ နောက်ဆုတစ်မျိုးက ဘစ် ကူမောင် ဟုတ်လား? ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျ ဒီဆုက ဘယ်လိုလဲခင်ဗျ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံချင်းစီရဲ့ နေထိုင်မှုစရိတ် ဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်တယ် ပြီးတော့ တန်ရာတန်ဖိုးရှိတဲ့ဈေးနှုန်း၊ အရသာရှိမှု စတာတွေရှိရမယ် အာ.. နေထိုင်မှုစရိတ်နဲ့ တန်ဖိုးရှိမှုကို တိုင်းတာတယ်လို့ ဆိုနိုင်တယ် အခု ထောက်ကယ်နွိုင်က ကျနော်တို့အတွက် ဘစ်ကူမောင် ၁၀ ဆိုင် စားရအောင်စီစဉ်ပေးတယ်ဆိုတာ သိချင်နေပြီ ဘာတွေရှိတယ် ဘယ်လောက်အရသာရှိတယ်ဆိုတာ အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား ကြည့်လိုက်ကြရအောင် အိုကေခင်ဗျ အခုကျနော်တို့ ဆုရတဲ့ အစားအသောက်နံပါတ် ၁ စပါပြီ ပထမဆုံးစာရင်း ဘတ်စ် နာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲ ဂဏန်းဖောင်းကြက်ဥ ! အာ.. ဘယ်စားဖိုက လာတာလဲ ခင်ဗျ အပ်စွန်စားဖို ကပါ။ အာ.. အိုကေ ကျနော်တို့ စားကြည့်ကြရအောင် အိုးဟို တကယ်ကို ဖောင်းနေတာဘဲ ! ပြည့်သိပ်နေတာဘဲ ကျနော်တို့လဲမြည်းလို့ရလား ကျနော်တို့ မြည်းကြရအောင် မြည်းကြည့်ပါ ဇွန်းနဲ့ခပ်လိုက်ရင် မြင်လား ဂဏန်းသားအရမ်းများတယ် ဟုတ်တယ် တကယ်ကို ဂဏန်းဖောင်းဘဲ ဟုတ်တယ် တကယ်ကို ဖောင်းနေတာဘဲ ကြက်ဥကာရောထားတဲ့ကြက်ဥကြော်အတိုင်းဘဲ အင်.. ပြီးတော့ ဂဏန်းသားလဲပါတယ် အလွန်အရသာရှိတယ် အလွန်အရသာရှိတယ် ပြောရမယ်ဆိုရင် ဂဏန်းရော ကြက်ဥရော ဖောင်းနေတာဘဲ တကယ်အရသာရှိတယ် အင်.. ဟုတ်ပါတယ် အသားက တို့ဟူးပျော့ပျော့လေးအတိုင်းဘဲနော် တို့ဟူးပျော့ပျော့လေးအတိုင်း ဟုတ်လား အာ.. ကျနော်တို့ ထောက်ကယ်နွိုင်နဲ့ ကြက်ဥမွှေကြော် စားကြမလား? ပြောသံကြားတာက ထောက်ကယ်နွိုင်က ဘာနဲ့စားစား အရသာရှိတယ်တဲ့ ! အာ.. ခဏနေ ကျနော်တို့ ထောက်ကယ်နွိုင်တောင်းကြရအောင် ထောက်ကယ်နွိုင်ပေးကြပါခင်ဗျ ဖွင့် ! လာပြီ ထောက်ကယ်နွိုင်ပြောတာ ဘယ်အရသာကောင်းမလဲ ကျနော်တို့ ဘယ်အရသာကောင်းမလဲ ? ကျနော် အစပ်ကြိုက်တယ် အာ.. အစပ် အာ. အစပ် ပုံမှန်ဆို အစပ်စားတယ် ခင်ဗျားဘာစားလဲ? ကျနော် အရသာ ၂ မျိုးကြိုက်တယ် ဒါပေမဲ့ ထောက်ကယ်နွိုင်မှာ အရသာ အများကြီး ရှိတယ် အရသာဆိုင်း အရသာရှိတယ်လို့ ပြောနိုင်တယ် ဟုတ်ပါတယ် ကျနော်တို့ စားကြည့်ကြရအောင် ထောက်ကယ်နွိုင်စားတာ ဘယ်လိုနေလဲခင်ဗျ ရပါတယ် ခင်ဗျ ! ထောက်ကယ်နွိုင်တိုင်း ကြွပ်ကြွပ်လေးဘဲ ဘယ်လိုလဲခင်ဗျ? အခုချိန်ကစပြီး အချိန်ကောင်းရောက်ပါပြီ ကျနော်တို့ အစားအသောက်နံပါတ် ၂ အတွက် အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား ? အဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီ ခင်ဗျ ! စမယ် ခဏနေ ကျနော်တို့ အစားအသောက်နံပါတ် ၂ ကို ကြည့်ကြရအောင် ! အိုကေခင်ဗျ အခုကျနော်တို့ အစားအသောက်နံပါတ် ၂ ရောက်နေပါပြီခင်ဗျ အခုပွဲက နာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲခင်ဗျ ဂဏန်းထမင်းကြော် အာ.. ဘယ်ကလဲ ခင်ဗျ ? ဖန်ဖား (မိုးကောင်းကင်ဖြတ်သန်း၍) စားသောက်ဆိုင် ကပါခင်ဗျ အာ.. အလွန်စားချင်စရာကောင်းတယ်လို့ ပြောနိုင်တယ် မိုးကောင်းကင်ဖြတ်လာတယ်ခင်ဗျ ကျနော်တို့ မြည်းကြည့်ရအောင် မိုးကောင်းကင်တောင်ဖြတ်လာတယ်ဆိုတော့ ဒီမှာ ကျနော်အရင်မြည်းမယ် ရပါတယ် ကျနော် ခင်ဗျားကို အရင်အမြည်းခိုင်းမယ် အလွန်အရသာရှိတယ် ! စားရသေးဘူး ! စားရသေးဘူး ! စားရသေးဘူးပါဆို ! လာလာ ကျနော်တို့ မြည်းကြည့်ကြရအောင် အူးဟူး.. ဂဏန်းသားက ပေါ့သေးသေး မဟုတ်ဘူးနော်၊ ကြည့် ! တကယ်ကို များတယ် အကြီးကြီးဘဲ ခင်ဗျ ဟုတ်ပါတယ် ကျနော်တို့ ထောက်ကယ်နွိုင်နဲ့ရောစားကြည့်မလား ကျနော်တို့စားကြည့်ကြမယ် လာ ! ဟေး.. ထောက်ကယ်နွိုင်ရှိရုံနဲ့ အနံ့အရသာပိုကောင်းစေတယ် ဖတ်ခ်ျ ဘယ်လို ဘာပြောတယ်? တကယ်ကောင်း တကယ်ပါ ကျနော်အရမ်းကြိုက်တယ် ကျနော်ထင်တယ် အခု အရမ်းရသာကောင်းတယ် ဟုတ်တယ် အခု အစားမရပ်ရင် ကျနော်တို့ ဗိုက်ပြည့်သွားလိမ့်မယ် ဟုတ်တယ် ! ဗိုက်ပြည့်သွားလိမ့်မယ် ကျနော်တို့ အစားအသောက်နံပါတ် ၃ သွားတာကောင်းမယ်ခင်ဗျ သွားမယ် အာ.. ကျနော်တို့ အစားအသောက်နံပါတ် ၃ ရောက်ပါပြီခင်ဗျ ဒါကို ဘယ်လိုခေါ်ပါသလဲခင်ဗျ? ဒါကို ဘယ်လိုခေါ်ပါသလဲခင်ဗျ? ကြက်သားပေါင်း စပါယ်ပန်းခြံ ကွေ့တီယိုဆိုင်ကပါ ဟုတ်ပါတယ် ဆော့စ်နဲ့စားရမယ်လို့ ပြောသံကြားဖူးတယ် နာရီ အလဟဿ မဖြစ်စေဖို့ အချိန် အလဟဿ / အချိန် ကျနော်တို့ ထောက်ကယ်နွိုင် ထဲ့စားမယ် ဟုတ်ပါတယ် အသားနဲ့ကြာဇံ ထိတွေ့ပြီးတော့ တကယ်ကိုလိုက်တယ်လို့ ခံစားမိတယ် အင်း.. ဟုတ်တယ် တကယ်တန်တယ် အကုန်စားရင် တကယ်တန်တယ် ဒါပေမဲ့အကုန်စားရင် ဗိုက်ပြည့်သွားလိမ့်မယ်ခင်ဗျ အရသာလဲအလွန်ကောင်းတယ် ဒါဆို ကျနော်တို့ နောက်တစ်ပွဲ ဆက်ရင်ကောင်းမယ် အစားအသောက်နံပါတ် ၄ ကြည့်ကြရအောင် အခု ကျနော်တို့ အစားအသောက်နံပါတ် ၄ ရောက်နေပါပြီခင်ဗျ ပွဲနံပါတ် ၄ ရောက်နေပါပြီခင်ဗျ နာမည် ဘယ်လိုခေါ်လဲ တုန့်ယမ်းဝက်သားကွေ့တီယို ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျ ရုန့်ရူယန်ဆိုင်ကပါခင်ဗျ အခုအသားလုံးတွေက အထူးသဖြင့် ကစီစာတွေက အလွန်ကောင်းတယ်လို့ ပြောကြတယ် ကျနော်တို့ အချိန်အလဟဿ မဖြစ်အောင် မြည်းလိုက်ကြရအောင် လာလာ ကျနော်ကလီစာယူမယ် ဟေး.. ဟေး.. ဟန်နဲ့.. ကလီစာစားမယ် ဒီလိုလုပ် ပေါင်ယင်းချွတ် ကစားပြီး ရွေးမယ် ပြီးပြီ အောင်း.. စတာပါ စတာပါ အရမ်းကြိုက်တယ် ဒီမှာ ဘာကလီစာလဲဆိုတာ ပြောရမယ် ဒါလဲ ကြိုက်တယ် အာ.. ဘယ်လိုနေလဲ? အရမ်းကောင်း ခင်ဗျား ကလီစာမြည်းပြီးပြီ ကျနော် အသားလုံး မြည်းတာကောင်းမယ် ကျနော် ကြာဇံ မြည်းမယ် ခဏလေးစောင့် ကလီစာဖောင်းလာမယ် အသားလုံးတကယ်ကောင်းတယ် ကိုက်ပြီးတော့ ပါစပ်ထဲမှာ ကျွတ်ကျွတ် ကျွတ်ကျွတ်နေတာ အွေး.. ကြာဇံလဲ စမ်းမြည်းပါအုံး ဟေး ဘယ်လိုနေလဲ / ပြောရမယ်ဆိုရင် တုန့်ယမ်းအရသာက ကြာဇံထဲထိရောက်တယ် တကယ်အရသာရှိတယ် ဟုတ်ပါတယ် ကြာဇံက အရမ်းနူးညံ့တယ် တကယ်တော့ ကျနော်တို့ ထောက်ကယ်နွိုင်ကို အစားထုံးသုံးနိုင်တယ် ကျနော်တို့ ဒီအစားအသောက်ကို ပိုစားကောင်းအောင် စသည်ဖြင့်ပေါ့ ကျနော် ကြာဇံကို ပိုစားကောင်းအောင် လုပ်ကြည့်ချင်တယ် ဟင်.. အရမ်းလိုက်တယ် အရမ်းစားကောင်းတယ် ဗိုက်ဝပြီလား ဗိုက်ဝပြီလား မ၀သေးဘူး ဆာနေတုန်းဘဲ ခင်ဗျားကော ဆာနေလား? စဆာနေပြီ ခင်ဗျား ကျနော့်မျက်နှာကို ဒီလိုမျိုးကြည့်တာ ကျနော်သိတယ် ဒါပေမဲ့ ခုနက စားတဲ့အစားအစာပွဲတိုင်း တကယ်အရသာကောင်းတယ် အာ.. ပွဲတိုင်း တကယ်အရသာရှိတယ် အချိန် အလဟဿ မဖြစ်စေအောင်လို့ ပွဲနံပါတ် ၅ စလိုက်တာကောင်းမယ် စမယ် ကျနော်တို့ အစားအသောက်နံပါတ် ၅ ရောက်ပါပြီခင်ဗျ ခင်ဗျ ကြက်ဥထုပ်ပင်လယ်စာ လတ်နာ့အရွက်ကြော် ဟုတ်ပါတယ် ကျားနတ်ကွန်း နှစ် ၄၀ အရွက်ကြော် လန်းနာ့ဆိုင် ဟုတ်ပါတယ် ဆိုင်နာမည်က ဘာလဲခင်ဗျ ကျားနတ်ကွန်း နှစ် ၄၀ အရွက်ကြော် လန်းနာ့ဆိုင် အော်.. သူငယ်ချင်းကို ဖုန်းဆက်ခေါ်ကြည့်ပါလား ဟဲလို အိုကေ ကျနော်တို့ မြည်းကြည့်တာကောင်းမယ် မြည်းကြည့်တာကောင်းမယ် မြည်းကြည့် လာလေ ဒါက ကျနော်သတင်းကြားတာက ပင်လယ်စာနဲ့ပတ်သက်လို့ အရမ်းကောင်းတယ်တဲ့ ဆိုင်ရဲ့ signature ပါ ပင်လယ်စာအရွက်ကြော် အလွန်လတ်ဆတ်တယ် အိုးဟို.. အရွက်ကြော် အရမ်းစားကောင်းတယ် အရမ်းစားကောင်းတယ် တကယ်ကို လတ်ဆတ်တဲ့ပင်လယ်စာ ဆိုင်ရဲ့ signature က အရွက်ကြော်မှာ ကြက်ဥကြော်နဲ့ထုပ်ထားတယ် မြည်းကြည့်ရအောင် သူတို့ရဲ့ငုံးဥအရမ်းအရသာရှိတယ် ဟင်း.. ဘယ်သူ့ရဲ့ငုံးဥလဲ? သူတို့ကဘယ်သူလဲ? ငုံးဥရှိတဲ့ဆိုင်နာမည်က? ကျားနတ်ကွန်း နှစ် ၄၀ အရွက်ကြော် လန်းနာ့ဆိုင် အေ.. ဒါဘဲလေ သူတို့ရဲ့ဟာ ပုံမှန်ဆို ခင်ဗျား အရွက်ကြော်စားလား? အရွက်ကြော်စားလား? မစားဘူး အရွက်ကြော်စားလား? စားတယ် ဘတ်စ် ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် အရွက်ကြော်စားမလား? စားမယ် အာ.. စမ်းကြည့်မယ်လေ အရွက်က ခါးတယ် ခါးလို့ရှိရင် ထောက်ကယ်နွိုင်နဲ့စားလေ အာ.. အဲဒါ အရသာ တကယ်ကို ပိုကောင်းစေတယ် ဟင်.. အရွက်စားနည်းသစ်ရပြီခင်ဗျ ဘတ်စ် အရွက်မစားရသလိုဘဲ ခံစားရတယ် ဟုတ်တယ် ဒါ အရသာကောင်းတယ် ဒါ့ကြောင့် အရွက်မစားနိုင်တဲ့အချိန်မှာ မင်း ထောက်ကယ်နွိုင်ကို သတိရလိမ့်မယ် ဟေး.. အနံ့အရသာအကောင်းဆုံးဘဲ ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျ ဆိုင်နာမည် ဘယ်လိုခေါ်လဲ? ကြက်ဥထုပ်ပင်လယ်စာ နှစ် ၄၀ အရွက်ကြော် လန်းနာ့ဆိုင် ကျားနတ်ကွန်း အေ.. ကျားနတ်ကွန်း အိုကေ ကျနော်တို့ အစားအသောက်နံပါတ်ခြောက် သွားကြစို့ အိုကေ သွားမယ် ကျနော်တို့ အစားအသောက်နံပါတ်ခြောက် ကြည့်လိုက်ကြစို့ နာမည်က လေလောင်ကြက်ဥပြည်ကြီးငါး ခင်ဗျ လေလောင်ဆိုင် ကပါခင်ဗျ ပြောသံကြားတာက ဒီဆိုင်ကပြည်ကြီးငါးက အရမ်းလတ်ဆတ်တယ်တဲ့ ကျနော်တို့ မြည်းကြည့်ကြရအောင် ဆော့စ်ထည့်ရမယ်နော် အူးဟူး.. ဆော့စ်နဲ့တို့စားရမယ်လို့ပြောတယ် ဟုတ်လား? တို့စား တို့စား အရသာကောင်းလား? သူတို့မှာ လုပ်တဲ့စက်ရှိတယ်ထင်တယ် ပင်လယ်ရေညှိက ပင်လယ်ထဲမှာ ရှိရမယ် ပြည်ကြီးငါးကလဲ ပင်လယ်ထဲမှာရှိတယ် အတူတွဲစားလိုက်ရင် အလွန်ကို the best ဖြစ်တာဘဲ အိုကေပါ အိုကေပါခင်ဗျ ကျနော်တို့အခု အချိန်တစ်ဝက်ရောက်ပြီ ကျနော်တို့ နောက်ဟင်းပွဲကြည့်တာကောင်းမယ် ၇ ပွဲမြောက်ရှိပြီ ဟုတ်ကဲ့ ကျနော်တို့အခု ၇ ပွဲမြောက် ရောက်ရှိနေပါပြီ ကျနော်တို့ မြည်းလိုက်ကြစို့ ဆိုင်ရဲ့အမည်က Mr.Joe ကွေ့ကျပ် နာမည်ကာ နိုင်ငံတကာဆန်တယ် ဟုတ်ပါတယ် နိုင်ငံတကာဆန်တယ် Mr.Joe ပြောသံကြားတာက signature က ဒါပါ ၀က်သားကြွပ် Mr.Joe ဆိုင် အူးဟူး.. ခရပ် ခရပ် သွားကျိုးသံ မဟုတ်ဘူး ၀က်အော်သံ ၀က်အော်သံ အတော်ကြွပ်တယ် အလွန်ကြွပ်တယ် အရမ်းအရသာရှိတယ် တကယ့်ကိုအရသာရှိတယ် ကြိုက်တဲ့သူတွေ ၀က်သားသုံးထပ်သား အပေါ်ပိုင်းကြွပ်ကြွပ်လေး စမ်းမြည်းကြည့်ရမယ် ကွေ့ကျပ် မင်းကို နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်ပေးမယ် အိုကေ ကျနော်တို့ ထောက်ကယ်နွိုင်နဲ့ စားကြမလား? လာ လာကြည့် ဘယ်လောက်အရသာရှိသလဲဆိုတာ အောက်ချပါ အောက်ချပါ အရသာရှိပြီးသားကို အရသာပိုကောင်းစေတယ် Mr. Joe ခင်ဗျား အရေရော အဖတ်ရောပါ အနံ့အရသာကောင်းတယ် ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျ အသားတွေကောပါတယ် တကယ့်ကို အများကြီးထဲ့ပေးတာဘဲ ဟုတ်ပါတယ် အိုကေ ခဏနေကျနော်တို့ ဗိုက်ပြည့်သွားလိမ့်မယ် ကျနော်တို့ အစားအသောက်နံပါတ် ဂ ကိုကြည့်ကြရအောင်ခင်ဗျ ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျ အခု ကျနော်တို့ အစားအသောက်နံပါတ် ၈ ရောက်နေပါပြီခင်ဗျ ကျနော်တို့ဒေသနဲ့ မြင်နေကျအစားအသောက်ဖြစ်ပါတယ် အဲဒါကတော့ ကြက်ဆီထမင်း ပါခင်ဗျ ပရသူနန်ကြက်ဆီထမင်း ကိုအံဆိုင် ကပါခင်ဗျ ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျ ပြောသံကြားတာက စားတဲ့အချိန်မှာ ဒီဆိုင်က သူတို့ရဲ့ဆော့စ် ထဲ့ရတယ်တဲ့ နဲနဲလေးတို့စား အာ.. သူတို့ရဲ့ ကင်မစ် အာ.. ကျနော်တို့ စမ်းကြည့်ရအောင ပြောသံကြားတာက ပသူနန်ကြက်ဆီထမင်းက အရသာရှိတယ်တဲ့ ဟုတ်လား? ဟုတ်ပါတယ် ခင်ဗျ ဟင်.. ဒါက အတော် မြင်ဘူးပါတယ်နော် ညဉ့်နက်ပိုင်းမှာ ကျနော် မကြာခဏ စားနေကျပါ ဒီလိုမျိုးလေ နောက်ဆို ဘတ်စ်ကို တွေ့ချင်တဲ့သူတွေ ပသူနန်မှာ လာစောင့်ရင် တွေ့လိမ့်မယ် ဘယ်နှစ်ခါဘဲစားစား မငြီးငွေ့ဘူးခင်ဗျ ကြက်သားနူးညံ့တယ် ထမင်းမွှေးတယ် ခုနက ခင်ဗျား ဆော့စ် စမ်းကြည့်ပြီးပြီ ခင်ဗျား ဆော့စ်က ဘယ်လိုနေသလဲလို့ ခံစားမိလဲ အရသာကောင်းတယ် အနံ့အရသာရှိတယ် ငံတယ် စပ်တယ် အားလုံးက ကြက်ဆီထမင်းနဲ့ အလွန်လိုက်ဖက်တယ် အာ.. ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျ ဒါကတော့ ဟင်းရည် ဟင်းရည်က ချွဲတယ် စားပြီးရင် အားခြောက်တယ်လို့ ခံစားရတယ် တကယ့်ကို ကောင်းပါတယ် ၈ ပွဲမြောက် ကျနော်တို့ကျော်ခဲ့ပြီးနောက် ၉ ပွဲမြောက်ကို သွားပါတော့မယ်ခင်ဗျ အခု ကျနော်တို့ အစားအသောက်နံပါတ် ၉ ရောက်နေပါပြီခင်ဗျ ကျနော်တို့ မြင်သားကျတဲ့အစားအသောက်ပါ အစားအသောက်နာမည်ကတော့ ပုဇွန်ဖတ်ထိုင်း ပါခင်ဗျ ဖိုင်ထလုဖတ်ထိုင်းဆိုင် ကပါ (မီးတောက်ထ ထိုင်းကြာဇံကြော်) ဟို.. တကယ်ကို မီးတောက်ထတယ်လို့ ပြောနိုင်တယ် ဟုတ်ပါတယ် ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့ရဲ့ ပုဇွန်ဖြစ်စေ ဒါမှမဟုတ် တို့ဟူးဖြစ်စေ အလွန်စားချင်ဖွယ်ပါ မီးတောင် ထတောက်တယ် ကျနော်တို့ မြည်းကြည့်ကြရအောင် သံပုရာသီးထည့်မလား? ထည့်လို့ရတယ် လာ မီးတောက်ထ မီးတောက်က ပုဇွန်ကိုတောင်လာထိတယ်ခင်ဗျ အာ.. တစ်ယောက်ကို ပုဇွန်တစ်ကောင်စီ စမ်းမြည်းကြည့်မယ်လေ ကောင်းလား? လာ ပြောသံကြားတာက ဒီဆိုင်ကပုဇွန်တွေက အလွန်ကောင်းတယ်တဲ့ ဘယ်လိုနေလဲခင်ဗျ? မစားရသေးဘူး အော်.. မစားရသေးဘူး ကျနော်ဆိုလိုတာက ထောက်ကယ်နွိုင်ဘယ်လိုနေလဲမေးတာ? အရသာရှိတယ် အူးဟူး.. ကြာဇံစင်း အနံ့မွှေးမွှေးရှိတဲ့ အခိုးအနံ့ရှိတယ် မီးတောင်ထတောက်တဲ့အမွှေး ထောက်ကယ်နွိုင်များများစားလေ ပိုအရသာရှိလေ အလွန်အရသာရှိတယ် ပြောရမယ်ဆိုရင် ကြိုက်တဲ့သူမည်သူမဆို စမ်းကြည့်ပြီးရင် စွဲသွားလိမ့်မယ်ခင်ဗျ စမ်းကြည့်ရမယ် ခင်ဗျား ဘယ်သွားမှာလဲ? တစ်ရှူးသွားယူမလို့ တစ်ရှူးသွားယူမလို့ပါခင်ဗျ ကျနော်တို့ ၉ ပွဲမြောက်ကျော်လာပြီ နောက်ဆုံးပွဲက အရသာအရှိဆုံး ကင်မစ် ရှိရမယ်လို့ ပြောသံကြားတယ် အာ.. ကျနော်တို့ ၁-၉ ပွဲ စမ်းမြည်းပြီးပြီ အားလုံး အရသာရှိတယ်ခင်ဗျ ကျနော်တို့ the best အဖြစ်ဆုံးဟင်းပွဲကို ကြည့်လိုက်ကြရအောင်ခင်ဗျ ဒီပွဲပါခင်ဗျ ၁၀ ပွဲမြောက် ကြည့်လိုက်ကြရအောင် ကျနော်တို့ နောက်ဆုံး ဟင်းပွဲ ရောက်ရှိနေပါပြီ ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျ ကျနော်ထင်တယ် စောင့်ရကျိုးနပ်တယ် ဒီမှာ ခေါက်ဆွဲ ပါခင်ဗျ ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျ အောင်သောင်ခေါက်ဆွဲဆိုင်ကပါခင်ဗျ ဒါဆို ဒီဆိုင်က ဖြူနေရမယ် ဘာလို့လဲခင်ဗျ? အောင်သောင်လိုမျိုးဖြူတာလေ အော်.. ခင်ဗျားက မြောက်ပိုင်းသားလား? မြောက်ပိုင်းသား ဟုတ်တယ် ပုံမှန်ဆို လှီးတာစိပ်တာကြိုက်လားခင်ဗျ? လှီးတာစိပ်တာတော်တယ်ခင်ဗျ ဟဲ.. အိုကေ ကျနော်တို့ စမ်းကြည့်မယ် ခင်ဗျားစမ်းကြည့်လေ တွက်ကပ်မနေကြနဲ့ ကျနော်စမ်းကြည့်မယ် ဒီလောက်တောင် တွက်ကပ်နေကြရင် ကျနော် မြောက်ပိုင်းအစားအစာတွေကို မစမ်းချင်ဘူး ကျနော်ငယ်ငယ်ကတည်းက စားလာတာဆိုတော့ ငယ်ငယ်ကတည်းကစားလာရင် ထောက်ကယ်နွိုင်နဲ့စားရမယ် အရမ်းအရသာရှိမှာ သေချာတယ် ခေါက်ဆွဲစားမယ်ဆိုရင် ကြက်သားလဲ စားရမယ် အရသာရှိတယ် အရသာရှိတယ် ဟင်.. အရသာကောင်းတယ် မြောက်ပိုင်းပုံစံ အရသာရှိတဲ့ခေါက်ဆွဲလေ ဒီလိုမျိုး ခင်ဗျား ဒီအနံ့ကို အမှတ်ရရမယ် တကယ်ကိုမြောက်ပိုင်းအနံ့ ဒီမှာခင်ဗျားက ဂေါ်ဖီချဉ် ကျနော်တို့ဒေသမှာ အရွက်ဆားရေစိမ်လို့ ခေါ်တယ် အဲဒါက ဂေါ်ဖီချဉ် မဟုတ်ဘူးလား? ဘယ်ဟာက ဂေါ်ဖီချဉ်လဲ? တရုတ်တွေရဲ့ အစားအစာတစ်မျိုး ဂေါ်ဖီချဉ်လို့ခေါ်တယ် ဆန်ပြုတ်နဲ့စားကြတယ် ကျနော်တို့မြောက်ပိုင်းမှာ အရွက်ဆားရေစိမ်လို့ ခေါ်ရမယ် ဟင်.. ကောင်းလား? ကောင်းတယ် အလွန်ကောင်းတယ် ဟုတ်ကဲ့ အစားအသောက် ၁၀ ပွဲစလုံး Bib Gourmand က အာမခံတယ်လို့ ပြောနိုင်ပါတယ် ဆိုင် ၁၀ ခုစလုံး ပွဲတိုင်း အရသာရှိပါတယ် ခင်ဗျ ဆိုင် ၁၀ ခုစလုံး ပွဲတိုင်း အရသာရှိပါတယ် ခင်ဗျ ဟုတ်ပါတယ် မည်သူမဆို စိတ်ဝင်စားရင် ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျ ကျနော်တို့ နာမည်အားလုံးကို ပြောပြီးပါပြီ ဟင်းနာမည်ပြောပြီး မှာယူအားပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျ ဒီကနေ့ အားလုံး အလွန်ပျော်ရွှင်တယ်လို့ခံစားမိရင် အခုလိုပျော်ရွှင်တာ ကြည့်ချင်တယ် ဆက်လက်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် ဘတ်စ် ကို ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျ Youtube : Taokaenoi TKN ပါခင်ဗျ ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျ Facebook Taokaenoi club ကို Like ပေးကြပါအုံး Subscribe လုပ်ဖို့လဲ မမေ့ကြပါနဲ့ ကျနော်တို့ ဘယ်မှမသွားသေးပါဘူး ကျနော်တို့ ရှေ့အခန်းဆက်မှာ ပြန်ဆုံကြပါမယ်ခင်ဗျ ကျနော်တို့ mission အတူတကွ ဖြစ်ဖို့ပါ ဟုတ်ပါတယ် စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ် ဟုတ်ပါတယ် ဒါပေမဲ့ ကျနော်တို့ ဘာဆိုတာ မသိသေးပါဘူး ဟုတ်ပါတယ် သိချင်သလား? သိချင်တယ်ခင်ဗျ သိချင်တယ်ဆိုဘာ ဘာလဲ ရှေ့အခန်းဆက် EP မှာကြည့်ရှူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျ ကျနော်တို့အခုနှုတ်ဆက်ပြီး ထောက်ကယ်နွိုင်သွားစားကြတာကောင်းမယ် သွားပါပြီခင်ဗျ ဘိုင် ပြန်ဆုံကြပါမယ်ခင်ဗျ
Posted in Articles, BlogTagged mrjoe, signature, star
Prev Indian Inspired Antique Furniture
Next Ax Men: Rygaard’s Risky Plan to Keep the Wood Moving (Season 10) | History
100 Replies to “Taokaenoi Season2EP. 04”
thank you TKN for having PerthSaint🖤❤️
kamonluk Pang says:
Ng Hoa says:
2 bé này mới quay cùng nhau hả em hay chương trình này quay lâu rồi vậy
Ria Spades says:
09:30 Low-key telling someone where to meet..
siriporn savangroj says:
Perth Saint and Bass are the best!!! Waiting for you all coming again and again,
Big thnk for Taokaenoi, very appreciated for your great mission for our lovely3boys.
Deepika Badugu says:
I'm crying I'm really miss Perth saint I'm so happy to see our Perth saint tk you so much taokaenoi my beautiful hero's again to close I'm so happy I waiting next episode tk you so much friend this video update me tk you v v v v v v v v very much taokaenoi
รักเเล้ว รักเลย says:
Ayato Bitch69 says:
I really like the Taokaenoi representatives.
I missed them so much😭😭
And bas has painted his nail black?he look damn hella good with that hair🥰😍❤️seeing perthsaint afteralong,brings back memories 💗💗
I miss my two bbys!!! 😭😭💕💕
My PerthSaint is comeback!!
Clara Handika says:
I love you baby bass forever😍😍😍😘😙😗😗😚😚😋
bbasjtr zone says:
FANG_ DER says:
I miss PerthSaint 😭❤️❤️
Jungshook Idol says:
Ba cậu nhóc đây rồi he he …😀😀😀 và các nhóc khác nữa 🤔🤔🤔 dễ thương quá hà
Altagracia Batista says:
No entendí nada pero tengo una sonrisa en mi rostro los amo perth Saint
Khatlyn Suarez says:
Perth saint is together again!!!!😍😍😍
Thank you Taokenoi!!!
Maraming salamat!!(thank you so much🇵🇭)
Yurica Hime says:
From start to finish i keep on staring at bass hands like damnnnn those black nailpolish suit his hands so good. I don't haveahand fetish but i feel like i suddenly had it. 😂😂😂🤣🤣🤣
Perth so handsome miss u
i’m your treasure says:
OMG I really want our PerthSaint to have their own show, that would be really fun :((
Perth saint we are really miss you two love you perth saint😊😊😊😊😊😊
อุ๋มอิ๋ม โลกสวย says:
Achara Nakdam says:
น้องบาสดูจะ happy นะคะ มีของให้กินในหน้าที่เยอะเลย 5555555
Bas looks likeahappy version of Gaara because of his red hair and black nails.
So Korn says:
ชอบสามหนุ่มนี้มากเลยค่ะ ขอหลาย ๆ Ep. เลยนะคะ
น้องเพิร์ธ น้องบาส น้องเซ้นต์ ❤
I really miss, PerthSaint omg :((
aom worarat says:
ai selliac says:
I wish there colorations Thai drama
Love you PerthSaint. Miss you together.
ruvannah oh na na says:
f fern says:
เรื่องกินต้องบาสสสสส ชอบอะ3คนนี้มารวมกัน
I miss bas so much omg! He looks so gorgeous with red hair ❤️
Constance Hsu says:
Abhirami Shaji says:
Behind the scene of this video… https://youtu.be/6KWDwI2guzQ
kpop kink says:
LETICIALIXO OMG says:
THANK YOU SO MUCH FOR ENGSUB OMG IM CRYING
Makanan indonesia dong
Sesil Lia says:
i hope perth and bass haveaseries together asacouple
Que guapo se ve perth ❤️
panha sopheap says:
I hope one day bas saint perth come to Cambodia for fan meeting ♥️♥️♥️
Thank for kh sub title ♥️🇰🇭
baby bas love u
Machchima P. says:
อยากถามความรู้สึกของเซ้นต์ ที่ต้องดูแลเด็ก2คน
Oktaviani Saputri says:
seneeng bangeet bisaa liiat merekaa bareeng 😘😘😘😘😘 lebiih sempurnaa kalloo ad p'phaa 😊😊😊
Jomar Samson says:
Bass i really miss you 😘😘😘😘
Love to see Saint and Perth 🐲🐯 working together. They looked so happy teasing each other.😊
Also love our cute baby Bas🏀🎴. Hope will get better soon from his fever 😢😢😢
Thank you Taokaenoi for supporting them! ❤
Nikki Girl Wii says:
That's super nice…Go perth…love yah!!
Perthsaint Bass interaction
Really Really miss PerthSaint. Thank you Taokaenoi
ไพรัช อุ้มเพชร says:
I only noticed that Perth and Saint are food lover haha😂😊😍They are still hungry while Bass is already full.
Hai p bass handsome'you come back again'i miss you'where p phana'mu
Dimana ada saint di situ ada pert'apakah mereka pacaran kah or besfrend forever
Aku kangen dengan aktingnyA bass and pacarnya p phana'kapan they play film boys love again
pupe ปูเป้ says:
rohanum abdul rahim says:
Sweet n cute big brother with two naughty n cute2small brothers. ,🥰😍😘
Niceia Alves says:
Baby Bas 💋💋💋💋💋💋
Deti Setiawati says:
Finally Perth&saint 😇
จันทร์เพ็ญ ปาสาโพธิ์ says:
Gem Works says:
😽😍😍Thank you thank you thank you!!!!!😍😍😍
I love seeing them together 🥰🥰
Ang Jtr says:
Nit Ac says:
My Baby BAS ❤
Angie C. Q .C. says:
it's really nice to see Perth and Saint in the same place and not looking unconfortable, I jumped when I saw them 😭😭😭😄😄 I like bass too 😅😅💚
an 1 luc nhieu mon vay thi … boi thuc mat
Shine Rosite says:
Tnx for English subtitle
จุน สิทะนูสอน says:
Perth x Bass
Thấy saint cứ nhìn bass thôi chứ có nhìn gì perth đâu trời….tội perth của mị quá nè
저 김과자 매출 진짜 궁금하다. 저 세명 모아두기 힘들지 않나?????
Thank P. says:
Qq Rattana says:
kitty woozi says:
Thanks for sub 😍😍
I really like tao kae noi seaweed original flavour ,it so tasty 😘
And i like other seaweed too
Im now addicted to seaweed
Mary Clan says:
Love u guys❤❤mostly Perth &Saint❤🐯💋🐉❤
Y I Love you says:
นิรา พูดเก่งมากเลยค่ะ เหมาะเป็น พิธีกรมาก ชอบ
Ryan Algarme says:
6:01 playback speed 0.5x. You’re welcome
So cute together I love it
nidia tercero says:
Amo veraestos tres juntos perth saint y baas
น้ําหวาน BB says:
Bangtan has taught me to Love Myself says:
PEEL THE SHRIMP! 😏😏 If you know what i mean 😏😏🍤🦐
Serikat Rejeki says:
#perthsaint kkkkkkk miss them
ลักษณ์นารา ภักดิ์ดุษฎี says:
coco Kong says:
Saint is really excellent ！handsome and emotionally intelligent, Saint controls the whole in this show to be interesting👏👏👏
So happy to see the three of them together
I love Perth Bas. Both of them so funny together
beesnee tr says: